Mareykanka oo soo saaray amar lagu yaraynayo tirada Qaxootiga Soomaaliyeed ee soo galaya maraykanka. – Balcad.com Teyteyleey
Mareykanka oo soo saaray amar lagu yaraynayo tirada Qaxootiga Soomaaliyeed ee soo galaya maraykanka.
By Maxamuud Axmed	 On Sep 28, 2017
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa waxaa ka soo baxay Amar lagu yareynaayo Qaxootiga dib u dejinta ka hela dalkaasi oo laga qaado Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakumo ee Dalka Kenya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray amaro midkaan la mid ah oo lagu midab takoorayo Muslimiinta gaar ahaan kuwa dalalkooda dagaalada sokeeye ka aloolsan yihiin oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Ugu yaraan 100,000 oo qoys oo Qaxooti ah ayaa sanad waliba dib u dejin ka heli jiray dalka Mareykanka ka hor inta uu Trump la wareegin Madaxtinimada Maraykanka looga arrimiyo, waxaana la sheegay in hadda la ogolaaday oo kaliya 45,000 oo ah kala bar intii horaan sanadkiiba geli jirey dalkaasi.
Amarkaan lagu yareynaayo Qaxootiga dalkaasi la dejin jiray ayaa si gaar ah waxay u saameyneysaa Soomaalida ku nool xerooyinka Qaxootiga Kaakumo iyo Dhadhaab ee dalka Kenya oo iyagu qaarkood nus qarni ku noolaa xerooyinkaasi Qaxootiga.
Dhanka kale Mareykanka ayaa ah dalka qaabila qaxootiga ugu badan adduunka taasi oo u muuqato inay sii nabaad guureyso taariikhadii fogeyd ee dalkaasi lagu yaqaanay waxaana u sabab ah Madaxweyne Trump oo moodo in Muslimiinta ay halis ku yihiin amaanka dalkiisa.
The post Mareykanka oo soo saaray amar lagu yaraynayo tirada Qaxootiga Soomaaliyeed ee soo galaya maraykanka. appeared first on Ilwareed Online.
Batuulo Gabale Oo Ka hadashay dilkii shalay Loogeystay Wiilkeeda *Dhageyso*